Itoobiya: “TPLF ma laha awood ciidan oo ay dagaal ku sii wadi karaan” – Radio Damal
“Ciidamada Federaalku caasimadda Maqale wey qabsadeen, balse Maqale oo ay ciidamada qabsadaan iney ka dhigneen, magaalada oo ay hanteen, hanashadu waa taageerada shacabka oo la hantiyo” ayuu yiri Getachew Reda.
Dagaalka ay ciidamada dowladda ku qabsadeen magaalada Maqale waxaa ka soo baxaya warar sheegaya iney dad rayad ah wax ku noqdeen, inkasta oo ra’isal wasaare Abiy Axmed oo baarlamaanka dalkaasi la hadlayey uu sheegay “Hal qof oo rayad ah inuu dagaalkaasi wax ku noqonin”.
Zadig Abraha oo ka hadlay amuurtaasina wuxuu sheegay dowladda iney dadaal aan yareyn ay u gashay waxyeellada dagaalka ka soo gaari karta shacabka rayadka ah sidaa darteed, sidaa darteed ay jirin dad rayad ah oo dagaalkaasi waxyeello ay ka soo gaartay.
“Dagaalka deegaanka Tigraay ka dhacay wuxuu ahaa mid sharciga iyo kala dambeynta lagu soo celinayo oo lagula jiray xoogagga TPLF balse ma ahayn mid shacabka deegaankaasi lala galay” ayuu yiri.
Wuxuuna intaasi ku daray “Shacabka dagaalkaasi waxyeello kama soo gaarin markaynu leennahay waxaan ka hadleynaa dhanka dowladda balse dhanka TPLF waxyeellada ka timid kama hadlayno maadaamaa inta uu dagaalka socday ay shacabka gabbaad ka dhiganayeen”.
Hoggaanka TPLF waxay marar badan ciidamada dowladda ku eedeeyeen shacab rayad ah oo aan hubeysneyn iney waxyeello u geysteen.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay ilo wareedyo isugu jiro diblomaasiyadda iyo hay’adaha samafalka waxay sheegtay 4 ka mid ah shaqaalaha hay’adaha gargaarka u shaqeynayay oo dhammaantood u dhashay dalka Itoobiya in lagu dilay xadka ay wadagaan Itoobiya iyo Eritrea.
Deegaanka Tigraay tani iyo marka uu dagaalka ka qarxay waxaa ka go’an adeegga taleefannada iyo Isgaarsiinta marka laga reebo magaalooyin dhowr ah oo maalmihi u dambeeyey adeeggaasi dib u helay.
Waxaana gabi ahaanba adag in la helo ilo madax bannaan oo xaqiijinayo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Mr Debretsion ayaa sheegay in ciidamada Tigray ay “diyaar u yihiin inay ku dhintaan difaacidda xaqa maamulka gobolka”.